Omenala ndị na-emepụta igbe nke ọma Rayson
Site na ike R & D siri ike na ike nrụpụta, Rayson ugbu a abụrụla ọkachamara na onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ. Emepụtara ngwaahịa anyị niile gụnyere mmiri zuru oke nke sitere na sistemụ nlekọta na usoro mba ofesi. Obere igbe nke na-eme nke ọma na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere nke matgel zuru oke na ọrụ zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị.forting rayson zuru oke na mmiri, ahịrị, na ụdị, agba na ederede. A na-agwakọta ihe ndị a n'ụzọ dị ka iji mee ka atụmatụ mara mma.